Koritaanka maskaxdu si joogtoa ah uyuu y socdaa. Unugyada maskaxda iyo dhammaan xiriiradii, marinadii ay mari lahaayeen intoodii badnayd booskoodii ayay ku sugan yihiin si ay u horumaraan. Maskaxdu waxay wataa inay si dhakhso ah horumar u samaysaa ilaa iyo da'da labada sannadood. Aragtidu waa dareemayaasha kan ugu dambeeya ee kobca waanu sii soconayaa kobcintiisu xitaa markuu wakhtigii uu ilmuhu ku dhan lahaa buuxsamo. Ilmuhu meel dhow ayuu si fiican ayuu wax uga arkayaa, qiyaastii 20.30 cm. Xasillonida wejiga waalidku waa sida ugu fiican marka uu ilmuhu waalidka eegayo. Qaabka iyo midabka adag/xooga badan aya noqonkara mid ilmaha dhiirigelin kara. Ilmuhu wuu garanayaa codka waalidka dana kama galo codadka hurdada ka qashqashaada. Markuu ilmuhu gaaro wakhtigii uu ku dhalan lahaa dareemayaasha ayuu codadka ku garankaraa.
Ilmuhu wuu xakaynkaraa dhaqdhaqaaqyadiisa waxaanu awood u leeyahay inuu isku soo dhowaado oo uu gacmihiisa afka geliyo. Ilmuhu gacmaha wuxuu ku leeyahay tamar uu ku dhaqdhaqaajiyo iyo lugo xoog badan keligiisna waxbuu qabsankaraa. Madaxa kor ayuu u qaadikaraa oo muddo ayuu keligiis kor u haynkaraa.
Ilmuhu hadda hurdo badan oo aan shaki ku jirina ayuu seexankaraa iyo wakhtiyo uu soo jeedo, laakiin weli ay ku jirto waxoogaa isdhaafsan oo u dhaxaysa hurdo iyo soo jeed markaa wuxuu u baahnaan karaa sidii uu u helihaa deggenaansho iyo hurdo. Ilmuhu wuxuu awoodikaraa inuu soo jeedo muddo yar oo gaaban oo uu xiisaynayo inuu adiga waalid ahaan uu rabo inuu wakhti kula qaato.
Carruuraha qaarkood ayaa u baahan in laga caawiyo neefasashada muddo xadidan, sida Cpap (Continuous Positive Airway Pressure). Wuxuu ilmuhu yeelan karaa isu dheelitirn la'aan garaaca wadnaha iyo neefsashada.
Bilowga hore waxa ilmaha lagu quudiyaa oo nafaqada lagu siiyaa faleebo. Ilmaha goor hore ayaa cuntada lagu siiyaa iyadoo la kaashanayo tuunbo (sond) sanka ayaa laga geliyaa ilaa caloosha soconaysa, halka carruuraha kale cuntada afka toos looga siiyo iyagoo naaska nuugaya, koob lagu siinayo cuntada ama masaasad. Waxa ay shaqaaluhu samaynayaan waxay ku xiran tahay waxa uu ilmuhu muujiyo ee uu awoodikaro iyo waxa aad idinku waalid ahaan doonaysaan.
Iyadoo ay ku xiran tahay koriinka ilmaha (usbuuca uu ilmuhu dhashay iyo heerka uu ka gaaray koboca/koriinka) waxa dhicikarta in ilmaha laga beddelo sariirta dhalada ka samaysan oo loo beddelo sariir kulul waxaanay sariirtu leedahay wax ku dahaaran oo korka laga saaray oo iftiinka ka ilaalinaya. Marka xitaa ilmaha lagu daryeelayo sariirta caadiga ah wuxuu qofku gashanayaa funaanad laga qaadanayo/amaahanayo isbitaalka. Waxa kale oo xitaa dhicikarta inay tahay wakhtigii aad idinku si wadajir ah u degi lahaydeen qolka daryeelka qoyska ee qaybta ku yaala.
Wakhtiga badan ee aad idinku isla qaadateen ayaa waxaad adiga iyo ilmahaaguba dareemaysaan wanaag badan. Fadlan qorshee in aad ilmahaaga la joogto marka uu ilmuhu wax cunayo, xafaayada laga beddelayo, loo qobeynayo ama la miisaamayo si aad goobta u joogto oo aad u daryeeshaan ilmahaaga adiga iyo shaqaaluhuba si aad ilmahaaga u barato iyo in aad aragto sida uu horumarka u samaynayo. Ilmuhu wuxuu muujinayaa inuu xiise u qabo waxyaabaha ku xeeran adiguna waalid ahaan waxaad ilmaha tusaysaa deggenaansho, waafajin iyo jewi iskudubadhacsan oo ilmaha ku xeeran si uu si deggan u seexdo oo uu awood ugu helo markuu soo jeedo. Carruuro badan ayaa caawimo ka hela iyagoo ka bixikara markay dadka la joogaan haddii uu ilmuhu caawimo ka helo jirkiisa oo boos fiican yaala kula hadal cod dabacsan ama si tartiib ah ugu hees ilmaha. Wuu garanayaa codkaaga ilmuhu. Wejiga bani, aadamka ayaa ugu fiican in ilmo yar aragtidiisa lagu xiiso geliyo. U keen qayb yar oo maro ah oo ay urtaadu ka urayso oo dhig meel wejigiisa u dhow.
Bilow adigu in aad caanaha naasaha ku jira aad soo saarto. Dhibcaha caanaha naasaha ee ugu horeeya ayaa ah qaar nafaqo badan leh (kolostrum) markaa si toos ah ayaa ilmaha afkiisa loogu qabanaya markaad shaqaalaha ku heshiisaan kadib. Marka ay caanuhu caadi u soo baxaan fadlan caadayso in aad caanaha in yaryar u listo si aad u siiso marka uu ilmuhu soo kaco.